Obi abụọ adịghị ya na blockchain dị ka nkà na ụzụ ọhụrụ na-aga n'ihu na-achọta ụzọ ya n'akụkụ ọ bụla nke ndụ na mpaghara Africa, ya mere ikike ya imetụta ndụ anyị kwa ụbọchị enweghị ike ileda anya n'ịtụle otú ndị mmadụ n'otu n'otu, òtù dị iche iche na gọọmenti si malite ịmalite ịmalite. ụgbọ oloko a na-akpụ akpụ.
N'ịgbaso mpụ nke ọma nke mbipụta nwa agbọghọ mebere nke Converge, Pan-African Blockchain & Crypto Meetup kwa afọ nke haziri Mgbidi.africa, ka usoro mgbasa ozi ga-edobe mbipụta nke abụọ (The Converge II) nke mmemme Wenezde a, Nọvemba 24, 2021. Debanye aha ebe a iji gaa.
Nzukọ Converge bụ mkparịta ụka dị mkpa na ụlọ ọrụ blockchain maka mmepe nke gburugburu ebe obibi dị mma na ya mere. Mgbidi.africa kwenyere na teknụzụ a na-apụta ga-enyere aka na mmepe kọntinent ahụ.
Ihe omume a bụ ihe dị iche iche Blockchain na Crypto gburugburu nkeji iri na ise nke na-achọ ikpughe ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na gburugburu ebe obibi na ndị mmekọ isi ihe dị ka Remita, Convexity, BNUG, Domineum na-akwado ya.
McEnies Global Communications, Clicks zuru oke na ụdị Ruby na-ewepụta iji nye Ngwọta Integrated maka ndị Naijiria.
Digital Encode na-akwụghachi ndị mmeri Cyberchain Hackathon ụgwọ
Ndụmọdụ 5 maka onye ode akwụkwọ ọdịnaya nke mmalite teknụzụ
Site na mmalite mmalite nke e-Naira ruo taa, mkparịta ụka gburugburu ego dijitalụ ụlọ akụ etiti Naijiria ewerela ụzọ dị iche iche.
N'ihi ya, Converge II a nkeji iri na ise blockchain na crypto meetup site blockbuild.africa ga-abanye n'ime "Mmetụta akụ na ụba nke e-Naira na cryptocurrencies na akụnụba Nigeria".
Kedu ka esi etinye ego sitere na azụmahịa crypto na akụ na ụba?
Kedu otu anyị nwere ike isi kwalite mmekorita n'etiti usoro ihe omimi nke blockchain na gọọmenti Naijiria iji chọpụta ngwọta blockchain na atumatu na-erite uru na akụkụ abụọ ahụ?
Mwepụta eNaira ọ na-agbanwe echiche akụ na ụba Naijiria?
A ga-atụle nke a na ọtụtụ ndị ọzọ na mmemme mebere nke Nọvemba 24 site n'aka ndị ọkà okwu nwere afọ ojuju:
- Lavina Ramkisson
- Muthoni N
– gọzie Emah
Debanye aha maka mmemme Converge II Ebe a.
Na-ebuga teknụzụ iji gboo ụkọ nri [ICT Clinic]
Nanị: Ịghọta Iwu na Tech Ecosystem
Ihe nkiri ise kacha elu maka ndị ọchụnta ego teknụzụ
Ụdị teknụzụ edobere maka agha ọnụahịa na Konga Yakata